Vavaka ho tony ary hanome toky ny olona iray. ? (Masiaka sy tezitra)
Ny vavaka natao tony sy hanomezana toky ny olona iray Zava-dehibe izany satria tsy fantatsika hoe rahoviana mety mila manao azy isika.
Matetika isika no mandehandeha na miaraka amin'ny fianakaviana ary mahita toe-javatra izay ilaintsika milamina ny olona izay ovaina na mandeha fotsiny ara-panahy izay misy ny vavaka iray ihany no fepetra azo ampiharina mba hanomezana toky azy, satria Izany dia rehefa lasa zava-dehibe io vavaka io.
Tsy maninona na olon-tsy fantatra, ny vavaka Matanjaka be izy ireo ary azo atao na aiza na aiza.
Aoka ianao ho tonga any amin'ny toerantsika hivavaka foana, ka ho lasa fitaovam-piadiana izay azontsika ampiasaina isaky ny manam-pinoana.
1 1) Vavaka mba hanomezana toky ny olona iray mahery setra
2 2) Vavaka mba hanomezana toky ny olona tezitra
3 3) Vavaka mba hampitony ny fangirifiriana sy hatezeran'ireo mpivady
4 4) Vavaka mba hampitony ny olona manelingelina
4.1 Rahoviana aho no afaka mivavaka ny vavaka?
1) Vavaka mba hanomezana toky ny olona iray mahery setra
«Tompoko, mangorohoro ny fanahiko; alahelo, tahotra ary tahotra no mahazo ahy.
Fantatro fa hitranga izany noho ny tsy finoako, ny tsy fisian'ny fandaozana eo am-pelatananao masina ary ny tsy fahatokisako tanteraka ny herinao infinito. Mamelà ahy, Tompoko, ary ampitomboy ny finoako. Aza mijery ny fahoriako sy ny fitiavako tena.
Fantatro fa mihorohoro aho, satria manantitrantitra, noho ny fahoriako, ny fijanonako amin'ny herin'ny fahantrako, ireo mahantra ahy, miaraka amin'ireo fomba fanaoko sy ny loharanoko. Mamelà ahy, Tompoko, ary vonjeo aho, Andriamanitro ô.
Omeo ahy ny fahasoavan'ny finoana, Tompoko; Manome ahy fahasoavana ny matoky ny Tompo tsy misy refy, tsy mijery loza, fa Ianao irery ihany no tadiaviko; Ampio aho Andriamanitra o!
Mahatsiaro ho irery aho ary nilaozana, ary tsy misy olona afaka manampy ahy, afa-tsy ny Tompo ihany.
Avelako eo am-pelatananao ny tenako, Tompoko, apetrako ao amin'izy ireo ny volon'ny fiainako, ny làlan'ny diako, ary avelako eo am-pelatananao ny valiny. Mino anao aho Tompoko, fa ampio ny finoako.
Fantatro fa ny Tompo nitsangana tamin'ny maty dia mandeha eo anilako, nefa mbola matahotra ihany koa aho satria tsy afaka mahafoy tanteraka ny tenako eo am-pelatananao. Ampio ny fahalemeko, Tompoko.
Ity vavaka ity ho tony sy hanomezana toky ny olona iray dia tena mahery!
Amin'ireny fotoana ireny dia mety ho fahita matetika ny mahita ny olona tezitra Toa niandry ny toe-javatra rehetra izy ireo mipoaka amin'ny resaka herisetra.
Azo antoka fa isika dia sendra toe-javatra izay ahitàna faona mahery setra amin'ny fiainantsika na amin'ireo olona manodidina antsika ary amin'ny fotoana hafa ny vavaka dia lasa fialofana tonga lafatra izay tsy misy anjara amin'ny herisetra.
2) Vavaka mba hanomezana toky ny olona tezitra
«Lehibe San Miguel
Kapitenin'ny tafika eny amin'ny tafika
Ianao izay nandresy ny ratsy imbetsaka
Ary ho tratranao io isaky ny tianao
Halaviro ahy ny ratsy rehetra
Ny fahavalo rehetra izay manandrana manohitra ahy
Ary tony ho an'ireo izay mbola mijanona amin'ny fiainako ihany
Omeo milamina sy tony izy ireo
Asehoy azy ny lalana haleha
Ny hatezerana dia iray amin'ireo fihetseham-po izay ananantsika olombelona ary sarotra fehezina, indrindra amin'ireo fotoana feno fahatezerana izay tsy anontaniantsika ny zavatra ataontsika na izay lazaintsika.
Podemos apetraka hatrany amin'ny olona tezitra ary ny hatezerana dia mipoaka amin'ny fotoana rehetra, tsy misy mahita antsika ho avy ary tsy afaka manao na inona na inona hisorohana izany.
Saingy rehefa manana fahalalana momba ny tontolo ara-panahy manodidina antsika isika dia afaka manjaka amin'ireto toe-javatra ireto amin'ny alàlan'ny fananganana fehezanteny iray fotsiny. Ilay olona mahatsapa hatezerana dia afaka mahatsapa ao amin'ny vatany ny zava-drehetra ary Andriamanitra no manomboka mifehy ny zavatra nataony ka tsy tezitra intsony izy.
3) Vavaka mba hampitony ny fangirifiriana sy hatezeran'ireo mpivady
«Ry anjely malala, lanitra, masina ary mahery amin'ny asan'ny asan'Andriamanitra
Ianao izay tia sy manome fitiavana
Teraka izy ireo hanao ny andraikiny ary hatramin'izao dia tsy nahomby izy ireo
Ampio aho handresy an'ity olana ity.
Ampio aho hahatakatra ahy izy
Fantaro ny olako, mba hahatakarako ny momba anao
Fantaro ny zava-tsarotra amiko, hahatakatra ny momba anao aho
Avelao izy hiditra sy hiresaka amiko, hamelako sy ho tia azy
Ampio izahay handresy io olana lehibe io
Ry anjely malala, ianareo no fahazavako
Ry mpitari-dalana sy fanantenako
Ianao no vahaolana amiko«
Io vavaka io mba hampitony ny fangirifiriana sy hatezerana mpivady dia azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra sy ny toe-javatra.
Ohatra, ny olona iray mandalo fanaintainana ara-batana na fanahy loatra dia mety ho tony rehefa avy nandray ny iray tamin'ireto vavaka ireto.
Tsarovy fa mandritra ny fotoana fangirifiriana na rehefa mikorontana ny vatan'ny olona sy ny saintsika amin'ny fomba miavaka iray, ny vavaka dia loharano azontsika ampiasaina ary fantatsika fa mahomby amin'ny fotoana sy toerana rehetra.
4) Vavaka mba hampitony ny olona manelingelina
«Tompoko ô, apetrako ao am-ponao ny fahatezerana sy ny mangidy izay matetika apetrako ato am-poko ato am-ponao ary mivavaka aho mba hamoahanao amin'ny fahasoavanao ny zava-drehetra izay mahatonga ny poizina mangidy mipetaka ato am-poko matetika, ary afaka izaho avy ao
Tompo ô, miaiky ny fahatezerako sy ny fangirifiriako ary fantatro fa rehefa avelako hidina ao am-poko io dia foanana ny fiombonanay iarahana.
Fantatro fa rehefa miaiky ny hatezerako aho, mahatoky ianao ary mamela heloka fotsiny amin'ny hatezerana ao am-poko sy manadio ahy amin'ny ratsy rehetra, izay hidera ny anaranao.
Nefa, Tompo, manantena aho fa hanafaka ahy amin'ity fahazotoana-dratsy ity ao am-poko aho, mba hialan'ny ozon'ny fahatezerana anay ao anatiny, ary mangataka aminao aho handinika ahy sy hanaisotra izay rehetra tsy ankasitrahan'ny masonao.
Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy,
Matetika ny tsy fetezan'ny andro isan'andro dia miangona ao amin'ny vatana sy ny fanahy mandra-pahatongan'ny fotoana fohy iray izay toa tsy maintsy mametra ny fetrany ary mipoaka ny zava-drehetra, very ny fifehezantsika ny tenantsika ary afaka manao adalana isika.
Eo antenatenin'ireto fotoana ireto dia zava-dehibe ny vavaka satria azontsika atao ny mampiasa azy ireo amin'ny fotoana ilantsika izany ary na iza na iza manodidina antsika. Fomba ara-panahy ny vavaka fa ho azontsika mandrakariva.
Ny vavaka azo atao isaky ny ilaina izany.
Misy ny mazàna mandany vola isanandro isan'andro hivavaka, saingy amin'ireto fotoana ilana ny vavaka ireto dia azo atao satria lasa loharano tokana ahafahantsika mampiasa azy ireo izy.
Azontsika atao ny miara-mivavaka am-pianakaviana na any am-piasana miaraka amina namana, saingy tsara ny manana fotoana iray irery mba hivavaka satria izany no misokatra ny fontsika alohan'ny fanatrehan'ny Tompo ary afaka miresaka aminy isika.
Tsy maninona na mampiasa labozia isika, raha milalao mozika malefaka na ara-panahy dia ataontsika manao azy mangina na feo mahery, ny zava-dehibe dia ny hoe ny vavaka no marina, fa avy amin'ny halalin'ny fontsika ary vita amin'ny finoana izany. satria mahalala fa mihaino antsika Andriamanitra ary vonona ny hamaly izay angatahintsika.
Araraoty ny herin'ny vavaka atao mba tony sy manome toky ny olona iray. Mijanona eo anatrehan'Andriamanitra